Paris Saint-Germain Oo Kula Dagaalami Doonta Manchester City Iyo Liverpool Saxiixa Toni Kroos
HomeWararka CiyaarahaParis Saint-Germain oo kula dagaalami doonta Manchester City iyo Liverpool saxiixa Toni Kroos
November 5, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka France, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Kooxda Paris Saint-Germain ayaa lagu soo waramayaa in ay doonayso saxiixa xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Real Madrid ee Toni Kroos xagaaga dambe.
31-sano jirkaan ayaa qandaraaskiisa haatan ee Bernabeu wuxuu dhacayaa Juun 2023, waxaana jiray soo jeedin ah in Los Blancos ay u furan tahay iibintiisa inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaaga soo aadan.
Eduardo Camavinga ayaa kooxda yimid suuqii dhawaa, halka kooxda Carlo Ancelotti la aaminsan yahay inay yihiin kuwa ugu cadcad saxiixa Paul Pogba ee Manchester United sanadka 2022, iyadoo khadka dhexe laga yaabo in la cusbooneysiiyo kahor xilli ciyaareedka 2022-23.
Manchester City iyo Liverpool ayaa labadaba loo aqoonsaday inay xiiseynayaan Kroos, kaasoo 7 kulan u saftay heerka kooxeed inta lagu jiro xilli ciyaareedkan.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay El Nacional , waxaa sidoo kale jira xiiso dhab ah oo ka imaanaya PSG, kooxda reer France ayaa go’aansatay inay ku guuleysato tartanka saxiixiisa sanadka soo socda.
Kroos oo sidoo kale loo maleynayo inuu bartilmaameed u yahay Newcastle United – wuxuu ku guuleystay laba horyaal oo La Liga ah iyo seddex Champions League intii uu ku sugnaa caasimadda Spain.